6 Yakanakisa Maitiro Aunofanira Kutevedzera Paunenge Uchivaka Unsubscribe Peji | Martech Zone
Isu takagovana dzimwe nhamba pa zvikonzero nei vanhu vachizvinyora kubva kune ako emaemail emaemail kana tsamba dzetsamba. Zvimwe zvacho zvinogona kunge zvisiri kukanganisa kwako, sevanyori vanowedzeredzwa nemaemail mazhinji zvekuti ivo vanongoda zororo. Kana munhu anonyorera achiwana uye nekudzvanya pane icho chisina kuzvinyorera chinongedzo muemail yako, urikuitei kuyedza kuvachengeta?
Nguva pfupi yapfuura ndakaita izvo chete ne Mvura inotapira, odhiyo yemidziyo saiti yanga iri inonakidza kushanda nayo. Ini ndakapotsa ndanzwa zvakaipa kudzvanya kusazvinyorera chinongedzo, asi ini handingotenge kazhinji zvakawandisa nemaemail madhiri anosvika mazuva mashoma mashoma. Pandakadzvanya iyo yekusazvinyora chinongedzo, izvi ndizvo zvandakaunzwa kwazviri:
Zvakanaka sei izvozvo? Panzvimbo pekuzvinyoresa kubva kune zvese, ini ndakangoderedza kuwanda kusvika kamwe chete pamwedzi.
Dai ndaizowana rino peji, ndaifanira kuripa A +! Kwete chete ivo vanopa sarudzo dzekuwandisa, ivo vachiri kuita basa rakakura rekundizivisa izvo zvandingave ndichishaya pamwe nekumisidzira tarisiro neumwe neumwe. Izvi zvinoenderana neiyo infographic Epsilon yakaburitswa, Kufamba neInbox Usazvinyora, ichiratidza matanhatu akanakisa maitiro ayo ese anotumira email anofanira kunge achitevera kana uchibata nevasina kunyora.
Sarudzo dzeKutaurirana - mira ne "zvese kana zvisina" peji rekuzvinyora uye nekupa nzira yakasungwa iyo inopa akasiyana matanho ekubatanidzwa.
Imwe-Dzvanya Usazvinyora - usaite kuti zviome kuzvinyoresa. Maonero ekupedzisira aunoita pane mumwe munhu akakupa iwe mukana wekutaura navo hakusi kuvatsamwisa nekusavarega vachienda.
Bvisa Usazvinyora - diki saizi-saizi, kuvanda kuseri kwemapango, kuongorora maemaresi emaimeri… kurega kuita kuti zviome kuwana uye kusazvinyora. Kana vanhu vachida kuenda, regai ivo.
Bvisa Vanyoreri - kana iwe uchida kuchengetedza yakanaka inbox kuisirwa uye yakasimba kubatanidzwa metric, suka runyorwa rwevanyori vasina kuita zvinopfuura gore (kana kupfuura kana iwe uri mwaka).
Yekupedzisira Chance - usati wabvisa vasina kunyoresa, vape mukana wekupedzisira kupa kuti vaone kana vangada kugara.
Tora Mhinduro - semuenzaniso uri pamusoro, ini ndanga ndisiri kusiya Sweetwater… Ini ndaisada maemail avo kazhinji. Usazvitorere wega kana munhu akanyorera achibva. Inbox yanhasi rakazara uye rakaoma kubata, vatengi vako vangangoda kuchengeta zvinhu zvakati wandei. Kana iwe uchida kuziva kuti nei wasiya, vabvunze pane rako risinganyore peji.
Kufambisa muInbox: Usazvinyora
Tags: email frequencyepsilonmaitikirorongedza rongedzakuchenesa vanyorerizvikonzero zvekuzvinyoramvura inotapirakusazvinyorakuzvinyora peji